Runako uye utano Kutarisira muviri
Anenge mumiri wezvigunwe zverefu, zvakagadzirirwa zvakanaka anoedza kuva nemafungiro akanaka, akanaka. Imwe nyanzvi yemazuva ano yekugadziriswa kwembambo inobvumira kwete kungoita zvipfeko zvehupi uye hurefu hupi, asiwo kuvakoshesa nekwakagadzirwa kwepakutanga. Zvinoshandiswa pane izvi zvipfeko uye sequin, mavarnish akasiyana-siyana uye mapepa, zvinyorwa uye shanduro. Munguva pfupi yapfuura, kuwedzera kukurumbira kunowanikwa ne nyl-stamping kana kutema manicure.
Manicure ne stamping
Yakashandurwa shoko iri risingazivikanwi riri nyore - kutsika. Icho chinonyanya kushandiswa nenzira yacho iri nyore, chaizvoizvo, kutora pazvipikiri zvezvifananidzo zvinoshandiswa zvakafa. Unyanzvi hwekombiyuta huri nyore zvokuti iwe unogona kuzviita iwe pamba. Zvakakwana kungotenga sarudzo chaiyo ye stencils uye kuchengetedza nguva shoma shoma.
Chimwe chinhu chinoparadzaniswa nemurume uyu ndeyekuti haufaniri unyanzvi hwakanaka uye tarenda yekudhira. Kushandisa zvinyorwa zvakasiyana kunokubvumira kufungidzira uye kuedza, uye nzira yacho inotora nguva shoma.
Nzira yekushandisa stamping?
Kutanga, iwe unofanirwa kuita manicure yekare uye kuvhara zvipikiri zvako nechecquer, uye zvinogona kuve zvakajeka kana kuti zvitsvuku, zviri nani kupa mapeoni epearlescent kuitira kuti mufananidzo wacho utarise zviri nani. Izvo zvakagadzirwa nokuda kwekugadzirisa iyi zvinosanganisira mapepa akasiyana-siyana anokosha, kufa kwakakosha uye stencils yekuputika.
Pahurukuro nemifananidzo, sarudza iyo yaunoda kuiona pazvipikiri zvako. Isa iyo pende kune stencil, inyorera kufa kune iyo, kuirimbisa zvakanaka, uye pakarepo ita kuti afa nechinyorwa chemufananidzo wembambo. Ndizvo zvose! Kuti ubvise pepa yakawandisa mubati iwe uchawana nyanzvi yakakosha, uye miedzo miviri ichaita kuti iwe uve nyanzvi yekupinza manicure. Kugadzirisa zvinogadzirisa uye kuchengetedza manicure, zviri nani kuvhara chigumisiro chakapedzwa nechavharidzi yakachena.
Kushandisa ma-diski akawanda nemifananidzo, kutora mifananidzo pamusoro pemumwe nemumwe, kusanganiswa kwemavara - izvi zvose zvinotanga nzvimbo dzakakura dzemafungiro ako. Gadzira chimiro chakasiyana pane zvipikiri ikozvino chiri nyore. Mukuwedzera, muzvitoro zvekupikira kwekugadzirisa iwe haugoni kusarudza kate yaunoda, asi zvakare kutenga mabhuku ne stencils uye mapaini, uyewo unoshandisa zvakasiyana yako kukosha kwezvigadzirwa zvemanicure kana kuchengeta zvigaro zve sequin, mazhenje uye zvimwe zvinhu zvekushongedza.
Ndezvipi varnish zvinodiwa kuti zvidimbuke?
Nokudhirowa mifananidzo pamisodzi nemubatsiro wekutsika, zvakanakisisa kutenga zvigadzirwa zvepamusoro. Mhedzisiro huru kubva kune varnish ndeyomumiririro uye mararita anozadza. Iko kuve nechokwadi chokuti kunyange iyo yakashata yakawanda inoshanduka kuva yakanakisisa uye yakajeka, pende iri rine ruvara rwakanyanya. Paunosarudza mavara, funga nezvekuti unozoshandisa sei. Iyo inonyanyozivikanwa, yega, yakasviba, yakachena uye yakatsvuka. Zvisinei, mifananidzo yepakutanga inogona kuwanikwa pamwe chete unexpected shades, kunyanya kana nheyo ichiitwa isina kuchena. Bhabhi rakanaka kana zvigadzirwa zvisingawanzoiti, mashizha pamazano emisumiri kana maratiro emhuka, hieroglyphs kana marudzi ose emaruva - ikozvino kunaka kwembambo dzako kwakakwana mumaoko ako.
Ita iwe pachako mumhepo yako paunenge uchinge wapedza nguva yakati, uuye uye uite chero zvigadzirwa zvemanicure, ndapota shandura shamwari dzako nemusikana wakakurumidza uye wakarurama pazvipikiri. Kutsika-tsika hakusi kungokusunungura kubva pakuenda kunakisa salons kumifananidzo pazvipikiri, asiwo kunokupa mukana wekukodza manicure yevakadzi vose vanoziva vamunofarira.
Mafuta kubva ku cellulite
Mafuta kubva kumapfudze pazvitsitsinho
Kuchengeta kwema Laser - zviitiko zvisingatarisirwi
Nzira yekuita musasa wekudzokera shure?
Mask for misumari ine tsvuku tsvuku
Pirelli-2017 mapeji ekaramende: Uma Thurman, Penelope Cruz uye dzimwe nyeredzi
Nzira yekubvisa rudo rwekudhakwa?
Cheese soup ne meatballs
Psychology yehukama - chii chaicho ushamwari?
Sei uchirota nyama yakasviba pasina ropa?
Britney Spears yakakosha mu 2015
Chikoro Vakasangana Nevasikana 2014
Patties ne cheese
Candidiasis ye stomatitis muvana
Patties ne rapberry raspberry pfudzi
Nzvimbo dzechando chando chando
Saladhi kubva kumakwenzi akazora pfumbi
Guta reVladimir - nzvimbo dzinotaridzika
Bhokisi rekuchengetedza matoyi - chibvumirano chekuronga muimba yevana!
Machechi eOrthopedic yevakadzi
Kuita zvirwere zvinodzivirira